Wasiiradda Caafimaadka Somalia oo ka mid ah 13 wasiir oo Afrikaan ah oo la dagaallaya Covid-19 (Arag liiska) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Wasiiradda Caafimaadka Somalia oo ka mid ah 13 wasiir oo Afrikaan ah...
Wasiiradda Caafimaadka Somalia oo ka mid ah 13 wasiir oo Afrikaan ah oo la dagaallaya Covid-19 (Arag liiska)
(Hadalsame) 13 Abriil 2020 – Caalamkii oo idil ayaa waxaa jilbaha u dhigay fayrus yar oo aan lagu arki karin isha qaawan, kaasoo aad u kharribay hab-nololeedkii maalinlaha ahaa ee dunida. Waa Coronavirus in lala xaalaana xirfad iyo xeelad badan ayay u baahan tahay.
Qaaradda Afrika, sida caalamka intiisa kale ayay u dadaalaysaa waloow ay kiisaskeeda iyo kaabayaasheeda caafimaadba ay ka yar yihiin kana liitaan caalamka intiisa kale.
Waxaan halkan idiinkugu haynaa 13 wasiir oo haween ah oo ka jira qaaradda Afrika, isla markaana ay ku jirto Wasiiradda Caafimaadka DF Somalia.
Afrika oo 51 dal ka kooban, 13 ka Wasiir 9 ka mid ah waxay haystaa shahaadada Doctorate-ka, waxayna ka socdaan Angola, Burkina Faso Congo Republic, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Guinea Bissau, Liberia, Mozambique, Somalia, Tanzania iyo Uganda.
Prince Akpah, oo ah Agaasimaha African PR & Rating Firm, Avance Media, ayaa soo bandhigay taxa marwooyinkaas la dagaallamaya caabuq sidaha Covid-19.
Previous articleSAWIRRO: Ruushka oo sameeyay qori nooca wax lagu shiisho ah oo aan abid horay loo arag (Biraha adag oo uu ka dusi karo)
Next articleTUHUN CUSUB: Shiinaha oo jaamacadaha dalkiisa u diidey inay daraasadeeyaan halka uu ka yimid Covid-19 (Muxuu qarinayaa?)